AKHRISO:- Maxaa kusoo kordhay Cudurka Coronavirus oo dunida qalqal geliyay “Tirada Dhimashada saxda ah”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaAKHRISO:- Maxaa kusoo kordhay Cudurka Coronavirus oo dunida qalqal geliyay “Tirada Dhimashada saxda ah”.
AKHRISO:- Maxaa kusoo kordhay Cudurka Coronavirus oo dunida qalqal geliyay “Tirada Dhimashada saxda ah”.
Tirada dhimashada cudurka dilaaga ah ee ‘coronavirus’ waxa uuna kor u kacay 743 ilaa 6,820 hal maalin gudaheed, isaga oo iska badalay hoos u dhac ku yimid dhimashada la arkay labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Raiisul Wasaare Narendra Modi ayaa sheegay in 1.3 bilyan oo qof oo reer India ah ay mari doonaan “xannibaadda guud” laga bilaabo saqda dhexe ee Talaadada muddo 21 maalmood ah si loola dagaalamo faafitaanka cudurka Covid-19.
Japan iyo Guddiga Caalamiga ah ee Ciyaaraha Olombikada ayaa Talaadadii isku raacay in dib loo dhigo Ciyaaraha Olombikada Tokyo hal sano sababo la xariira faafitaanka coronavirus.
Dhimashada Spain ayaa kor u dhaaftay 514, maalin gudaheed, taasoo ka dhigeysa wadarta guud 2,696. Waxa ay sidoo kale dowladdu sheegtay in 6,600 xaaladood oo cusub, taas oo kor u qaadday kiisaska la xariira Covid-19 oo haatan gaartay 39,673.
In ka badan 17,100 qof ayaa u dhintey COVID-19 adduunka oo dhan, sida lagu sheegay xog aruurinta Jaamacadda Johns Hopkins. Ku dhawaad 103,000 oo ka mid ah 392,000 ee qof ee laga helay cudurka ayaa soo kabsaday.